fenicha Art sens - mazano eimba nebindu
Mhedzisiro ye: fenicha
Iyo yeganda pallet grill zvakare zvakare pfungwa yekushandisa zvakare
Dhizaini yekicheni ine green green accents uye inotonhorera mhanza
Kicheni ine chimiro chekirasi, yakarongedzeka zvishoma balcony uye yakarongedzwa
Tinokuisira iwe imba yekurara yakanaka mu pastel pink-yepepuru toni uye yakanaka yekushongedza.
Idiki kicheni yemukati mukatikati yakasanganiswa yemhando dzakasiyana. Dhizaini
Iyi yomukati inofuridzirwa zvakakwana nechitenderedzwa chimiro. Zvinoonekwa
Contemporary yemukati nehurongwa hwakavhurwa hwekugara, kicheni uye yekudyira nzvimbo. At
Harmonious yemukati dhizaini yemafurati ane akapfava mavara mune brown-beige shades uye yakadzikama yakachena
Imba yekugara neyakaipirwa kicheni
Inotonhorera yemukati meimba yekutandarira ine kicheni hombe umo munharaunda yekugara
Kupisa uye kunonakidza dhizaini imba diki
Mune ino diki yekugara, sangano renzvimbo rakagadzirwa na
Iyi dhizaini inosanganisa yazvino uye yemaitiro echinyakare semuenzaniso mukuru we
Stylish imba yekutandarira ine yakavanzika kitchenette
Yakanaka imba yekutandarira dhizaini - yakavhurika nzvimbo nekicheni hombe,
Yakachena uye inonatsa imba yekutandarira dhizaini mune pastel zvinyoro mitundu. Iyo yakazara
1 peji kubva ku712345Inotevera »Pakupedzisira